Bekugxilwe Emhlabeni, Uguquguquko Esimweni Sezulu Nemfundo Ephakeme Esifundweni Sesikhumbuzo Sika-JL Dube
UMnu Ngila Michael Muendane (kwesobunxele) noMnu Lukhona Mnguni.Click here for English version
Ochungechungeni lwezinsuku ezine zeSifundo Sesikhumbuzo sika-John Langalibalele Dube, lowo owayeboshelwe ukuba yisishoshovu somzabalazo nongumbhali uMnu Ngila Michael Muendane nowenza izifundo zobudokotela kwezombusazwe e-UKZN uMnu Lukhona Mnguni badingide indaba yomhlaba, ukuguquguquka kwesimo sezulu nemfundo ephakeme.
UMuendane ubalule ukuthi umhlaba yimpahla emqoka. ‘Ngaphandle kwawo, ngeke kwabanazindlu, nakudla, nazingubo, namigwaqo futhi ngeke kwaba nandawo yokugcina amanzi. Kafushane nje, ngeke kwaba nampilo. Impilo yonke incike emhlabeni. Unembeza wethu kufanele engabe usenza sikhumbule ukuthi akulungile ukuncisha omunye umuntu amandla okubhekana nezidingo zakhe.’
Wengeze ngokuthi uhlelo lwaseNingizimu Afrika lokubuyisa umhlaba luhambisana nokubuya kwezwe i-Afrika yonke. ‘Asikhohlwe wumhlaba, ubukoloni basiphuca inkululeko yomqondo ukuze sithole izindlela zokuwubuyisa ngokusiphuca amandla ethu nokufaka umqondo wokuthembela kwabanye abantu okuyimbangela yokuhlukumezana sodwa, umqondo omi ndawonye, ububha, inkohlakalo nokungabi nozwelo okwenza singabi munye, kwezinye izinto.’
UMuendane ugxeke uhulumeni ngezinhlelo zokubuyisa umhlaba, wasola inhlangano ebusayo ngokuqamba amanga ngokubuyisela umhlaba ebantwini abaphucwa wona. Uthe ukuhluleka kukahulumeni ukuletha ama-30% omhlaba ebantwini abayizigidi ezingama-25,6 ezingenamhlaba kukhombisa ukuthi izinhlelo ze-African National Congress azilungile kanti lokhu kuwukudlala ngegeja kuziliwe.
Uthe ‘kungenzeka ukuthi abantu abasacindezelwe ngokwesiqu kodwa ukucindezelwa kwabo ngokomqondo kusaqhubeka nanamuhla kanti kugqame kakhulu kwezemfundo ephakeme. Kufanele zibuye emasisweni ebantwini, babuyele emasikweni abo, bazithole ukuthi bangobani. Kufanele bayeke ukuthembela kwabanye abantu, babambelele emfundisweni yokuzimela kaDube.’
Inkulumo kaMnguni ibheke impilo kaDube ngeso lezemfundo ephakeme ne-COVID-19. Uthe izikhungo zemfundo ephakeme zaseNingizimu Afrika zizamile ‘ukuthi izinto zingashintshi ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngobuchwepheshe ukuze kuqedwe unyaka wokufunda nangenkohlakalo yokuzama ukuphasisa izitshudeni ngayo yonke indlela, okufenyise isithunzi sezicucu zemfundo. Lokhu (ngeshwa) kwenza ezinye izitshudeni zizibone ziphumelele.’
NgokukaMnguni, ‘uDube ubezosinxusa ukuthi senze izikhungo zethu zikhulule abahlwempu, zifukule imiphakathi yakithi, zifake umoya wethu ngekusasa lethu siyizwe. Ubezophoxeka wukuziphatha kokuzicabangela, ubugovu, ukukopela, ukuntshontsha amaqhinga abanye nokuholela abantu abavele utiki okuvame ukubonakala esikoleni.’
Uthe ukube uDube usaphila ‘abafundi bebezoqhubeka nokuba ngabaholi bemikhankaso emisha nesidingo sokwenza izindlela ezintsha zokufundisa ezihambisana nezinselelo zesikhathi esiphila kusona. Besingeke sijahe ukuqeda unyaka wokufunda kepha singakhathazeki ngokuthi izitshudeni zizophelela kuphi ngomuso.’
UMnguni uthe ngeminyaka yoDube nomholi wabantu abamnyama eMelika u-Booker T Washington kwakunokuxhumana phakathi kwemfundo, umbusazwe, intuthuko nekusasa. ‘Namuhla lezizinto sezihlukanisiwe, okuholela ekutheni sibe nezifundiswa ezingamagwala eziphila emakhosombeni azo. Ngenxa yalokhu ubumqoka bemfundo bubhekwe ngeso lokhozi.’
Inkulumo yakhe ibuze imibuzo ethi libhekephi ikusasa lemfundo ephakeme? Kungani singenazo izinto ezisheshe zisixwayise ngezinkinga ezikhona esizweni? Ezemfundo singenza kanjani ukuthi zihole kunokuthi zisalele emuva nemiphumela yokushintsha kwezinto? Kungenzeka ukuthi imfundo ephakeme ibone izinto zingakenzeki futhi ihambe phambili njengasesikhathini sikaDube noma kufanele seneliseke ngobuthuntu esiyibona manje? Ingabe isidingo sokuhlonishwa sesihlanekezele isidingo sokuphila?
UMnguni uthe, ‘Eminye yalemibuzo iyadinga ukubuza ngendawo yemfundo ephakeme. Ngikholwa wukuthi uDube ubezosikhuthaza ukuthi sizishintshe senzele isizwe, sibambelele emoyeni wokukhuthala osho ikusasa kunemanje. Imfundo ephakeme kufanele ibe yisisekelo somhlaba esiwufunayo ngomuso, iphendule imibuzo esinayo ngokuhlangana kwemfundo, ezombusazwe nokuhlelela intuthuko nekusasa.’